तीन लघु कथा – Chitwan Post
तीन लघु कथा
‘स्वागत छ, तिमीलार्ई भेट्दा खुसी लाग्यो’– पुरूको टाउकोमाथि आफ्नो हात उठाउँदै अनुहारभरि खरानी घसेको अवतारले भन्यो ।
‘म तपाईंको हुँडलिएको जमातलाई समेल्न सक्ने क्षमताको प्रशंसा गर्दछु’– पुरूले सामान्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्दै हात जोड्यो ।
जोडिएर उठेका हात तल झरिसकेका थिएनन्, पहिलेकोले भन्दा बाक्लो खरानीको लेपन लगाएको अर्को एक बलिष्ठ जवान आशिषको भावमा हात उठाउँदै आयो । पुरूका आँखाले अवतारलाई खोजे । ऊ त पर पुगिसकेको रहेछ, देखियो धमिलो छायाजस्तै ।
पुरूको अनुहार आश्चर्यले धमिलियो । त्यसै बेला उसले भन्यो– ‘म नयाँ अवतार हुँ । आजसम्म तिमीहरुलाई दिइएका वरदानहरु पूरा गराउने दायित्व लिएर आएको छु । अबका तपस्याहरु मेरै नाममा हुनेछन् ।’
पुरूको धमिलिएको मुहारमा खिन्नता बढ्दै थियो, अर्को शरीरैभरि निख्खर खरानी दलेको मुसुन्द्रे मुस्काउँदै लामो हात उठाउँर्दै टुपुल्कियो र भन्यो– ‘के हेर्दै छौ, पुरू ? यी हिजोसम्मका नक्कलीहरुले आफ्नो स्वर्गासन प्राप्तिका लागि छरेका सबै वरदानहरु पूरा गर्ने अभिभारा लिएर आएको छु म ।’
उसको कुराले पुरू झोक्राइरहेको थियो । ‘म, जाज्वल्यमान नयाँ अवतार, तिमीहरुको भाग्य विधाता हुँ । यी अघिल्लाले बिराएको बाटो सोझ्याउने दायित्व मेरै हो । अब आइन्दा मेरो मात्रै प्रार्थना हुनेछ’– जाज्वल्यमान नयाँ अवतार रवाफिलो स्वरमा बोल्यो ।
पुरूका बिलखबन्द एकोहोरो टोलाइरहेका आँखाले अघिल्ला दुवै अवतारहरु खोज्यो तर दोस्रोको धमिलो छाया मात्र देख्यो, कतै टाऽऽढा । अघिल्लाभन्दा झन् मीठो बोली भएको सक्कलीजस्तो देखिने तेस्रो अवतारलाई हे¥यो । उसले पनि पहिलेकाले झैँ नै हँसिलो अनुहार बनाउँदै एक हातले नाङ्गो खुकुरी खेलाउँदै रहेछ । पुरू घोप्टो प¥यो ।
धर्मराजले छोराछोरीको पढाइलेखाइमा राम्रै ध्यान पु¥याए । आफ्नो कमाइ बचाइराख्नेभन्दा तिनैको पढाइमा लगाउनु श्रेयष्कर माने । परिणामस्वरुप छोरो गाउँमै अद्वितीय निस्क्यो । विचार तीक्ष्ण र व्यवहारमा खरो । घरको त छँदै थियो गाउँलेको पनि प्रशंसाको पात्र बन्यो । हुँदाहुँदै त ऊ यति विश्वासपात्र भयो कि कसैले ‘किन’ भन्ने प्रश्न गर्नै छाडे ।
एकदिन उसले भन्यो– ‘समय अन्तर्राष्ट्रियवादी भइसक्यो । हाम्रो घर एकदमै सफा, शुद्ध तथा आधुनिक हुनुपर्छ । कसैले दोष देखाउने वस्तु यहाँ रहनुहुन्न । कुनै भूतप्रेतको छाया रहनुहुन्न । समाज परिवर्तनको हरेक पाइला घरैबाट सुरू गर्नुपर्छ ।’ सबैले ताली पिटी समर्थन जनाए ।
‘यो भान्छामा सबैको पहुँच पुग्नुप¥यो । यो जमानामा किन तलमाथि ?’ यो सुनेर केटाकेटीहरु समेत खुसीले उफ्रे । ‘पु¥याऊँ न त आफ्नै सन्तान त हुन् नि’– बाबुले सहर्ष स्वीकारे । भान्छाको चौको भत्काइयो ।
‘यो बार्दली भत्काइदिऊँ ।’
‘किन र बाबु, यसले के ग¥योछ र ?’
‘यो नब्बे सालको भूकम्पपछि थपेको होइन ? अशुभ भयो ।’ बूढा चुपचाप सुनेर बसे ।
‘यो हाम्रो ढोका फालौँ । एक त यो पलासको, अर्को यो राणाकालमै बनेको रहेछ । र, झन् अर्को कुरा त, यो राणाकालको ढोकाले त्यति बेलाकै नियम लगाई गाउँवासीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको रहेछ । हरेक गाउँवासीले यो घर मेरो पनि हो भन्ने महसुस गर्नु प¥यो नि’– उसले मुख फाल्यो ।
सबै कुरा सुन्दै बसेको धर्मराज जुरूक्क उठ्यो, टोपी झिक्यो र आँसु पुछ्दै भन्यो, ‘ए बाबु ! म पनि राणाकालकै पो हुँ ।’
धेरै दिनदेखि रहेको रिक्त स्थानमा प्रमुख गुरूको नियुक्तिले गुरूकुलका हरित प्रवरका शिष्यहरु हर्षोल्लासमा रमिरहेका थिए । त्यसो त प्रवरअनुसारका गुरूहरुको प्रवेशमा रक्त, हरित तथा पीत प्रवरमध्ये सजातीय शिष्यहरुले आफैँ अनुकूल राता, हरिया तथा पहेँला दीप प्रज्वलन एवं पूर्ण घडा राखी स्वागत गर्ने प्रचलन व्याप्त थियो । त्यसैगरी, अन्य प्रवरले नाडीअनुसार कृष्णवस्त्र तथा रिक्त घडा प्रदर्शन गर्दै सके सडक तामझाम गर्ने, नसके पत्रपत्रिकाहरुमा अघिल्लो वा पछिल्लो पातोमा व्याख्या विश्लेषण छपाएर जुहारी चलाउने परम्परा थियो । यसपटक भने आश्चर्य भयो ।
हरित प्रवरका महागुरूले पदभार ग्रहण गरिसक्ता पनि न रक्त न त पीत प्रवरद्वारा सडकमा कुनै तामझाम भयो वा पत्रिकामा उल्लेख्य जुहारी चल्यो ।
‘यस्तो कर्मछाडा भयौ भने तिम्रो प्रवर कसरी धानौला मनुवा ?’– यी मनुवाहरु मुर्झाएको देखी रक्त प्रवरको शुभचिन्तक गुरूले प्रवर प्रमुखलाई घच्घचायो ।
‘गुरूवर, तपाईंले स्मरण गराउनुभयो, हार्दिक धन्यवाद छ । तर दुःखको भनौँ वा सुखको कुरा ? म अल्मलिएँ गुरू’– उसले मुर्झाउँदो स्वरमा भन्यो ।
‘के भयो र ? किन यति कमजोर भयौ ?’
‘गुरू के भनौँ, हरित प्रवरकै भए पनि दुःखमा काम लाग्लाजस्तो पो छ त । कसरी ओकलौँ पेचिलो आगोे ? गुरू, यिनी त यति क्षमतावान् छन्, परिआए यिनले त गुरूपत्नीसमेत ग्रहण गर्न सक्छन् । के यो दक्षताले कुनै दिन हामीलाई समेत नओत्ला र?’
‘ए हो र ?’ छोटे गुरू टोलाउन लाग्यो ।
पहिले को आयो ? (आजको कविता)